२०२२ मा खरिद गर्नका लागि शीर्ष तीन क्रिप्टोकरेन्सीहरू - Shiv's Era
२०२२ मा खरिद गर्नका लागि शीर्ष तीन क्रिप्टोकरेन्सीहरू
1. बेबी डोज आक्रामक वृद्धि क्षमता भएको क्रिप्टोकरेन्सी हो।
2. सोलाना एक ब्लकचेन प्रोटोकल हो जसले उच्च स्केलेबिलिटी र गति सक्षम गर्दछ।
3. Seesaw Protocol ले ब्लकचेनहरू बीचको मूल्य स्थानान्तरणको लागि अनुमति दिन्छ, यसलाई एक आदर्श लगानी विकल्प बनाउँछ।
3 क्रिप्टोकरन्सीहरू लामो अवधिमा हेर्नको लागि
बेबी डोज र सोलाना जस्ता युवा, साना स्केल, चाखलाग्दो क्रिप्टोकरन्सीहरू छन् जुन घातीय वृद्धिको अनुभव गर्ने तीनवटा सम्भावनाहरू हुन्। सबै तीन सिक्काहरू आक्रामक वृद्धि रणनीतिहरू खोजिरहेका छन्, जसले 2022 सम्म तिनीहरूको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्छ।
कम्प्युटर क्रिप्टोकरेन्सी स्टक मार्केट ट्रेडिंग चार्ट प्रयोग गरेर क्रिप्टो व्यापारी लगानीकर्ता।
“वाह, यो क्रिप्टोसँग के भइरहेको छ?”
बेबी डोज हालैका हप्ताहरूमा लगानीकर्ताहरूको नयाँ प्रिय बन्न पुगेको छ। CoinMarketCap अनुसार पछिल्लो 30 दिनहरूमा यो पहिले नै 200% माथि छ। फ्यानहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी ब्रोकरेज, Binance मा सूचीबद्ध क्रिप्टोकरेन्सी प्राप्त गर्न लडिरहेका छन्।
Seesaw Protocol ICO – दैनिक प्रयोगकर्ताका लागि ब्लकचेनलाई सजिलो बनाउँदै
Seesaw Protocol ले धेरै ब्लकचेनहरू बीच एक कनेक्टरको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले धारकहरूलाई तिनीहरू बीचको मूल्य पठाउन र प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो क्रिप्टोकरन्सीले Binance (BNB), बहुभुज (MATIC) र Binance स्मार्ट चेन बीचको लेनदेनको सुविधा दिएर आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्छ। SSW यसको पूर्व-बिक्रीको केही हप्तामा 1,000% भन्दा माथि छ।
अनलाइन भुक्तानी र पैसा लेनदेनको लागि Blockchain
सोलानाको लागि हालको बजार, कम लेनदेन लागत र उच्च स्केलेबिलिटी भएको स्मार्ट अनुबंध प्लेटफर्म
बजारमा सबैभन्दा ठूलो बाजी मध्ये एक, सोलानाले वर्षभरि १०,०००% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि देख्यो। स्मार्ट अनुबंध प्लेटफर्ममा कम लेनदेन लागत र उच्च स्केलेबिलिटी छ।
SeeSaw Protocol: कसरी ब्लकचेन टेक्नोलोजी र साझेदारी अर्थतन्त्र समन्वय गर्दैछ